महासंघको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा चण्डिमाथि साइबर आक्रमण - corporatekhabar : Nepals first corporate news magazine and portal
महासंघको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा चण्डिमाथि साइबर आक्रमण
काठमाडौं– मोमेन्टो एपेरिएल्स प्रालि र चण्डीराज ढकाल ६० को दशकमा एउटा उचाइ चुमेका नाम हुन् । तर, यो उचाइ कहिलेकाहिँ ढकाललाई अभिसापसिद्ध हुन्छ । तीन हजार कालिगढसहित चलिरहेको ममेन्टो गार्मेन्ट माओवादी द्वन्द्वको शिकार भयो ।
यो बन्द भएपछि तीन हजारले रोजगारी गुमाए । त्यसपछि ममेन्टो थला परेको प¥यै रह्यो । यो राज्यले पनि बुझेको छ भने बैंकले पनि यसलाई महशुस गरेका छन् । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव नजिकिदै गर्दा यही विषयलाई लिएर उनीमाथि ‘साइबर आक्रमण’ हुन थालेको छ । त्यसमा पनि विदेशी साझेदारीमा पुनः सञ्चालमा ल्याउन लागिरहेका बेला उनीमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण हुन थालेको हो । यसैगरी बैंकको ऋण पनि चुक्ताका लागि ‘नेगोसिएसन’ भइरहेको बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।
नेपालमा एक व्यवसायीले सकेसम्म अर्कोलाई माथि उठ्न नदिने प्रवृत्ति छ । यसमा व्यवसायीहरुको बानी नै लागेको छ । यसको प्रत्यक्ष शिकार यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा प्रदिपजंग पाण्डे भए । उनलाई लगाइएको आरोपको डटेर लड्नु भन्दा पनि उनलाई फालेर अध्यक्ष बने पशुपति मुरारका । यसलाई माडवाडी व्यसायीहरुको जितको रुपमा लिइयो ।
तर, त्यसले व्यवसायीबीच नयाँ द्वन्द्व सिर्जना ग¥यो । महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुका अनुसार विनोद चौधरीले दोस्रो कार्यकाल अध्यक्षको दावी गरे । यो समय पद्म ज्योतिले चौधरीलाई परास्त गरेपछि द्वन्द्व शुरु भएको थियो । त्यही द्वन्द्वको जितका रुपमा पशुपति मुरारका अध्यक्ष हुनु हो। यसरी माडवाडी यहाँका रैथाने ब्यवसायको द्वन्द्व चलिरहेको थियो । यही द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न भवानी राणा, शेखर गोल्छा सहितको टिम बनाएर अघि सरे ढकाल । र, जित पनि हात पारे। तर, फेरि विधान संशोधनको विषयलाई लिएर माडबाडी समुदाय सशंकित बनेको छ । कतै गोल्छालाई अध्यक्ष नबनाउने षड्यन्त्र त होइन भन्ने उनीहरुको आशंका छ ।
साथीभाइमाझ पार्टी गरिरहेको समयमा गोल्छा ढकालले आफूलाई अध्यक्ष नबनाउने चाल चलिरहेको बताउने गर्छन् । तर ढकाल भने यो विषयलाई ठाडै नकार्छन् । ढकाल भन्छन्, ‘मेरो उद्देश्य देशलाई आर्थिक उन्नतिर डो¥याउनु हो । यसका लागि मिल्नुको विकल्प छैन।’
आफू सबैलाई मिलाउने कोसिसमा हुने तर अरुले आफूलाई सिध्याउने चाल चल्ने गरेको दुखेसो पोख्छन् । भन्छन्, ‘हरेक जिल्लाका साथीहरुले माया गर्छन् । उनीहरुलाई परेको समस्याका लागि पनि त्यहीँ पुग्छु । यसलाई राजनीति ठान्छन् अरु ।’
आफूले देशबाट मुद्रा बाहिरिने व्यवसाय गर्न नचाहेको बताउँछन् । निर्यात बढाउने व्यवसायलाई निरन्तरता दिन मोमेन्टो पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताउँछन्।
तर, सन्निकट रहेको महासंघको निर्वाचनमा आफूलाई बीचमा ल्याउने काम हुन लागेको उनको बुझाई छ । जसका कारण पछिल्ला समयमा आफू बारे नकारात्मक हल्ला फैलाइन थालेको उनी बताउँछन्।
महासंघमा यतिबेला अध्यक्षका लागि गोल्छा बाहेक अर्कोको दाबी देखिएको छैन । तर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने बस्तुगत उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, जिल्ला उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको दाबी छ। जिल्ला उपाध्यक्ष तिर अहिले सम्म अरुण सुमार्गी बाहेक अरु देखिएको छैन । बस्तुगततर्फ बरिष्ठ सौन्दर्यविद कमला श्रेष्ठ र हुन्डाई नेपाल तथा नाडाका पुर्व अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठको दाबी देखिन्छ । एशोसिएटमा भने सौरभ ज्योति र साहिल अग्रवालको दावी छ ।
महासंघको निर्वाचनमा ढकाल महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेकाले आफूलाई असहयोग गर्नसक्ने आशंका भएकाहरुले उनीमाथि आक्रमण गर्न थालेको बुझिएको छ ।
प्रकाशित : २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार
फिल्मी शैलीमा शाह माथि आक्रमण, प्रहरीले घटना दबाउन खोजेको आरोप
राज्य ‘दोहन’ गर्न सरकारी निकायबीच प्रतिस्पर्धा
चिनी उद्योगीहरुले सरकारलाई झुक्काए: प्रधानमन्त्री ओली
‘सधै विदेशी अनुदान ल्याउने होईन , विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ’
"NEPALS FIRST CORPORATE NEWS MAGAZINE AND PORTAL."
Corporate is National Business Magazine and Nepals first corporate news portal established by the group of professionals who have long experience in the field of business journalism, management.
Editor Ujjwal Jung Shah Sub-Editor Basant Aryal Reporter Ram saran Ghimere Marketing Sangita Khatri
Address CTC MALL, Sundhara, Kathmandu, Nepal Contact 014259196 , 9803405272 Email viewoncorporate@gmail.com
Copyright ©2018 All rights reserved | Designed by Thakuri Creations